Miolakolaka mahitsy, Fifandraisana mirenireny, fironana vaovao amin'ny birao samihafa sy mahomby | Yuqiang Design - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Fiolahana mahitsy, fifampiraharahana mandehandeha, fironana vaovao amin'ny birao samihafa sy mahomby | Yuqiang Design
Fiolahana mahitsy, fifampiraharahana mandehandeha, fironana vaovao amin'ny birao samihafa sy mahomby | Yuqiang Design
2021 / 06 / 19 FisokajianaInterior design 4872 0
Ny famolavolana dia tsy tokony hijanona amin'ny fifehezana ny tsipika sy ny loko
Tsy tokony hijanona eo amin'ilay toerana fotsiny izy io
Ny famolavolana dia tokony hamorona hevitra
Miteraha fifandraisana ara-pientanam-po eo amin'ny olona sy ny habakabaka
"Aesthetic, manavao, azo ampiharina, mora takarina, voafehy, mahatoky, tsy manam-potoana, antsipiriany, sariaka amin'ny tontolo iainana ary tsy dia miha mahomby."
–Ny mpamorona endrika Dieter Rams
Nanolotra tolo-kevitra folo momba ny “famolavolana tsara” izy.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, YuQiang & Partners dia nifantoka tamin'ny fironana vaovao isan-karazany amin'ny famolavolana birao, toy ny maitso, isan-karazany, mahomby ary kanto. Miaraka amin'ny fahitana ara-javakanto jerena mialoha, nanangona traikefa tamin'ny famolavolana tetik'asa amin'ny mizana maro samihafa izahay, toy ny birao fampiasan-tena sy fampirantiana birao, ary lasa mpisava lalana tsikelikely amin'ny famolavolana ny endrika birao.
Ao amin'ny dingan'ny fampiharana ny famolavolana dia mifantoka amin'ny fahatakarana ny toeran'ny orinasam-pandraharahana izahay, ny fampifangaroana ireo fepetra takiana amin'ny fivelarana sy ny toetran'ny mpiasa ary ny famaritana tsara ny toetra mampiavaka ny orinasa tsirairay. Miorina amin'ny fanekena ny vidiny, izahay koa dia manampy ny orinasa hamantatra ny mety ho takian'ny birao isan'andro avy amin'ny fotony, handray ny maha-azo ampiharina ho teboka fanombohana ary hanamafisana tsikelikely ny mety ho lanjan'ireo zavakanto amin'ny toerana birao.
Any amin'ny Distrikan'i Wuxiang Vaovao ao amin'ny tanànan'i Nanning no misy ilay tetikasa, miaraka amin'ny gorodona manontolo ny gorodona, ary mangarahara amin'ny lafiny rehetra ny tontolon'ny fijery tsara.
Amin'ny maha-orinasa miditra tsimoramora, manangana sy miasa tetik'asa fiarovana ny rano sy fiarovana ny tontolo iainana, dia ampiasainay ny toetran'ny "rano" ho tsiranoka, plastika ary feno fiainana. Nampidirinay ny boribory boribory nanerana ny trano iray manontolo, miaraka amin'ny fizarazarana tsirairay mifampitohy arakaraka ny tinady, ary ny maoderina tsirairay avy dia ampiana singa ara-javakanto arakaraka ny tinady hifanaraka amin'ny toetran'ny birao "mivelatra sy miiba"
Torolàlana hita maso malefaka nefa mahery
Ny psikolojia momba ny tontolo iainana dia manenika ny lafim-piainana rehetra. Ho an'ny famolavolana birao, ny mpamorona dia mila mampifangaro traikefa lojika, mba hijanonan'ny "maso" ara-tontolo iainana "mitombina" ary mitazona ny "fahatsapana ara-tsiansa" ho an'ireo mpampiasa.
“Mifanohitra amin'ny birao nentim-paharazana miaraka amin'ny zoning mazava, ny tadiavinay dia ny hampanjavozavo ny fetra. Hoy ilay mpamorona: “Tianay ny mampiditra ny rivotra sy ny hazavana amin'ny faritra tsirairay, manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fivezivezena.”
"Ny rindrina rehetra, ny tsanganana, ny jiro, ny fanaka malefaka, dia tsy natao hanasarahana ireo toerana misaraka. Node fotsiny izy ireo amin'ny 'fikorianan'ny ankapobeny' amin'ny peratra, izay misy ifandraisany amin'ny olona sy ny zavatra rehetra. ”
Mba hitazomana ny "fofonaina" vokatry ny tadin'ny boribory mihantona dia tsy maintsy refesintsika ny elanelana "marina" eo amin'ny hazavana sy ny valindrihana.
Taorian'ny fitsapana maro hamerenana ny takelaka takelaka dia nanomboka namoaka "hazavana" madio sy malefaka hatrany ambany ka hatramin'ny avo ny tontolo iainana matotra manomboka amin'ny fidirana.
Ny fihoaran'ny tsipika sy ny zavamisy amin'ny zavatra. Ny endrik'ilay birao fandraisam-bahiny misolelaka dia feno endrika rano mikoriana, toa milamina sy mihetsika, malefaka ary afaka. Ny vokatry ny jiro miafina miafina ao amin'ny mezzanine dia mitondra fanitarana sy fampiononana bebe kokoa amin'ny sehatry ny fanahy.
▲ Ny fandraisana ny ascenseur
▲ Modely latabatra fandraisana
Ny kaodim-pitondran-tena amin'ny tsipika mahitsy dia ny refin'ny endrik'ilay habaka mikoriana. Ny estetika amin'ny fiolahana malefaka dia mifanaraka tsara eo ambanin'ny habakabaka mikoriana.
▲ Faritra fandraisana ny filoha
Ny sosona fanalokalofana ny fitondran-tena
Ny fanitarana marindrano ny lalantsara dia manjavona amin'ny fahitana. Ny dinamika rehetra dia aseho amin'ny volavola lava amin'ny fomba silhouette, mamorona fitenenana hita maso izay toa zarazaraina nefa tsy misaraka, ary toa azo zahana nefa tsy azo zahana.
▲ Ny vokany
Ireo fifanoherana goavambe sy an-kolaka ireo dia miteraka endrika malefaka sy fahasarotana, manankarena amin'ny fiovana miolakolaka amin'ny fiolahana avy lavitra ka hatramin'ny akaiky, ka mahatonga ny sosona habakabaka hanana fanitarana sy gadona be.
Ny fanapahana ny tsipika dia mamorona fizarana faharoa amin'ny jiro voajanahary. Ity teknika hita maso ity dia mitazona ny fifandraisana misy ifandraisany amin'ny sary anatiny, manatsara ny "mari-pahaizana anti-interferensi" an'ny birao iraisana, ary mamaha olana maro azo ampiharina toy ny jiro sy ny rivotra, ary ny fitarihan'ny tsipika fivezivezena.
▲ Fisarahana fizara-tany
Ny fifandraisana amin'ny filaminana sy ny fahefana
Misokatra ny efitrano fivoriana, malalaka sy feno filaminana. Ny traikefa an-tandrifin'ny tanàna dia apetraka miaraka amin'ny sary hatrany. Ny fahitana mivelatra sy ny habaka ankehitriny dia mivondrona mba hifampiresaka amin'ny habaka iray ihany, ary mahaliana ny fomba fijery an-tsary.
Room Efitrano fivoriana
Ny tanàna lavitra dia tafiditra ao amin'ny habakabaka, ary ny rivo-drivotra milamina sy milamina dia mitovy amin'ny fampiasana ny olona marobe sy ora maro mahaliana sy mahomby.
Office Birao nozaraina
Ny faritry ny fandraisam-bahiny malalaka sy malalaka dia toetra sosialy entin'ny biraon'ny birao. Ny tampon'ny biraon'ny filoha dia misy faritra fandraisana, efitrano fandriana ary birao mpitan-tsoratra, izay manankarena sy mavesatra. Izany dia mifanaraka amin'ny fametrahana ny faribolana stratejika ny indostrian'ny sisintany, izay manaja ny asa manokana namboarina sy ny fiainana amin'ny lafiny rehetra.
▲ Biraon'ny filoha
Ny mpamorona dia mametaka endrika geometrika isan-karazany amin'ny sakana tokana, manampy sy mampihena mifanitsy. Na dia mitazona ny fifandraisana misy eo amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa aza izy io, dia manasongadina ihany koa ny sary sy ny fanehoana, manome ny sakana fahatsapana fifangaroana miovaova kokoa.
Ny loko marina amin'ny famaranana hazo, ny fananganana ary ny famolavolana dia tafiditra amin'ny lafiny rehetra. Manomboka amin'ny habakabaka ka hatrany amin'ny zanak'olombelona, ​​dia misy ny toe-tsaina am-boalohany sy tsotra.
Ny famolavolana lamina fampidirana olona, ​​hazavana mangarahara ary fisokafana, dia sehatra tsy miankina amin'ny elitisman'ny orinasa, fa toerana iray misy firaiketam-po ho an'ny vahiny ihany koa.
▲ Biraon'ny mpitantana
Fiovana ara-pihetseham-po mamelombelona ny vatana sy ny saina
Ahoana ny fomba hijerena ny fifandraisan'ny olona eo amin'ny tontolo iainana, ary ny famoronana fitokisana momba ny toetran'ny olombelona sy ny fihetsem-po ankoatry ny estetika?
Ny efi-dite, toerana iray hisaintsainana sy dite, dia mitana anjara asa lehibe amin'ny fanovana ara-pientanam-po.
Room Efitra dite
Ny halo mazava dia manome fahatsapana sary malefaka sy maivana, ary ny fifandraisana voajanahary eo amin'ny sehatry ny asa sy ny sehatry ny fialamboly dia miteraka tetezamita amin'ny lafiny ara-psikolojika, ka lasa milamina kokoa ny fifandraisana sy ny fifandraisana.
Anaran'ny tetikasa: Biraon'ny vondrona Guangxi Guoling
Ekipa mpamorona: Yu Qiang Interior Designers & Associates
Vita ny tetikasa: 2021
Faritra tetik'asa: 1970㎡
Toerana misy ny tetikasa: Nanning, Guangxi
Tetikasa sary: ​​ingalog
Niorina tamin'ny taona 1999, Yu Qiang Design dia napetraka ho "birao mpamorona endrika anatiny". Izy io dia mikendry ny ho lasa sehatra famolavolana ho an'ny mpamorona atitany miavaka mba hiara-hiasa, hitondra ny fandrosoana tsy miova amin'ny foto-kevitra amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny vaovao, ary hitazona hatrany ny fanavaozana ny endrika sy ny tanjaka.
Taorian'ny 20 taona mahery, nanangana ekipa olona efa ho 200 izahay ary nanangana rafitra fitantanana sy rafitra fitantanana tetikasa tonga lafatra. Izahay dia mizara ny ezak'ireo mpanjifantsika amin'ny fitantanana ny tetikasa mba hiantohana ny fizotran'ilay tetikasa iray manontolo sy ny fampisehoana tonga lafatra ny valin'ny famolavolana.
Nanatri-maso ny firoboroboan'ny indostria izahay ary maharitra amin'ny fikasana tany am-boalohany hanohy hamorona ohatra indostrialy mijery sy manara-penitra ho an'ny mpanjifanay. Toy ny mahazatra dia mitazona ny foto-kevitra fototra amin'ny “famoronana tsy manam-petra” izahay. Ny ekolojika serivisinay amin'ny "famolavolana famoronana sy ny birao manokana" dia mifanaraka amin'ny filan'ny serivisy famolavolana samihafa an'ny mpanjifanay.
Mino foana izahay fa mifanaraka amin'ny fanarahanay ny idealinay.
Previous :: Hajaina italiana sy rendrarendra hananganana fiainana romantika | HID Helbena Design Next: Ny fampifangaroana endrika sy kanto | Maria Belousova
2021 / 08 / 15 4600
2021 / 08 / 15 4092
2021 / 08 / 14 4365
2021 / 08 / 14 3716